कसरी Parc Güell भ्रमण गर्ने यात्रा समाचार
कसरी पार्क G visitell भ्रमण गर्ने
मरियम | | बार्सिलोना, संस्कृति
बार्सिलोनाको एन्टोनियो गौडेको आधुनिकतावादी विरासत केवल मनमोहक छ: कासा बट्टे, सगरडा फामिलिया, कासा मिली… यद्यपि, प्रसिद्ध क्याटालिन वास्तुकारले भवनहरू मात्र होइन तर बगैंचामा उनको रचनात्मकता पनि खोल्यो।
उसको कल्पनाको परिणाम स्वरूप, पार्क गोयल देखा पर्‍यो, एक ठाउँले १ 1984 in XNUMX मा युनेस्को द्वारा विश्व सम्पदा घोषित गर्‍यो। र १ 17 हेक्टर भन्दा बढि क्षेत्रफलको साथ मोसाइक, लहरी र ज्यामितीय आकारले भरिएको छ र प्रकृतिद्वारा प्रेरित।
यो पार्क यति लोकप्रिय छ कि तपाईं सायद यसलाई भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ बर्सिलोनाको यात्राको लागि। र तपाईंले गर्नु पर्छ! किनकि यो बार्सिलोनाको प्रतीकात्मक ठाउँहरू मध्ये एक हो र जसको सबैजनासँग फोटो छ।
यस पार्कको नाम युसेबी गोयलको हो, जो धनी व्यापारी हुन् जसले गौडाको प्रतिभाको लागि जोश गरे जसले उनको मुख्य संरक्षकको रूपमा काम गरे। यद्यपि पार्क जेलका लागि मुख्य विचार लक्जरी आवासीय परिसर बनाइएको थियो, समय बित्दै जाँदा यो विचार खारेज भयो र यसको ठाउँमा हामीले सबैले सुनेका पार्क निर्माण गर्यो। एक जादुई र अद्वितीय स्थान जुन सँधै यसको आगन्तुकलाई अचम्मित गर्दछ।
पार्क जेल सन् १ 20 २० को दशकमा जनताको लागि खोलिएको थियो र त्यस पछि यो बार्सिलोनाको मुख्य पर्यटक आकर्षणहरू मध्ये एक भएको छ।
बार्सिलोनामा पार्क Güll को सीढी
1 पार्क गोयल कस्तो छ?
2 पार्क पार्कमा हामी के भेट्न सक्दछौं?
3 पार्क Güell को लागि टिकट मूल्य
4 पार्क Güell को निर्देशित भ्रमण
पार्क गोयल कस्तो छ?
१ 17 हेक्टेयर भन्दा अधिक क्षेत्रको साथ, पार्क जेल अनडुलेटिंग फार्महरू, रूखजस्ता स्तम्भहरू, पशुहरूको आंकडा र ज्यामितीय आकारहरूले ढाकिएको छ। हामी भित्र धार्मिक प्रतीकात्मक तत्वहरू पनि भेट्टाउन सक्दछौं जसले यसलाई अझ विशेष अर्थ दिन्छ।
गौडीले पहाडको असमानताको फाइदा उठाउन साइटको आध्यात्मिक उचाइको बाटो बनाउन चाहेका थिए जुन टुप्पोमा निर्माण गर्ने योजना गरिएको चैपलको भ्रमणमा टु .्गिने थियो। अन्तमा, यो विचार कार्यान्वयन गरिएको थिएन र यसलाई स्मारकले कलवरीमा प्रतिस्थापित गर्‍यो, जहाँबाट तपाईं बार्सिलोनाको उत्तम विचारहरू राख्नुहुन्छ। कत्ति राम्रो छ!
पार्क पार्कमा हामी के भेट्न सक्दछौं?
मुख्य प्रवेशद्वारमा त्यहाँ दुई घरहरू छन् जुन कथा जस्तो देखिन्छन्। कासा डेल गार्डा पार्कको विगतमा अडियोभिजुअल प्रदर्शनहरू होस्ट गर्दछन् जबकि अर्को घर स्टोरको रूपमा कार्य गर्दछ। भेट्न जान्ने अर्को सब भन्दा चाखलाग्दो स्थानहरू पार्कको भित्र गौडिज हाउस संग्रहालय हो, जहाँ कलाकार १ 1906 ० and र १ 1925 २XNUMX बीचमा बस्थे।
पार्क गोएलको केन्द्रबिन्दु एउटा ठूलो वर्ग हो जहाँ एक विशाल ११० मिटर लामो बेन्च छ जुन मोजाइकले ढाकेको सरीसृप जस्तो देखिन्छ। अधिकांश सतहहरू रंगीन सिरेमिक चिप्सले बनेका मोज़ेकले सजाइएको छ जुन विशेष गरी आकर्षक र अद्वितीय हो।
पार्क Güell को लागि टिकट मूल्य
एक जिज्ञासाको रूपमा, २०१ since देखि सबै आगन्तुकहरूले पार्क Güll स्मारकहरू पहुँच गर्न टिकट तिर्नै पर्छ। पार्क जेलको स्मारक क्षेत्रमा प्रवेश गरीएको छ र बक्स अफिसमा ठूला लामहरू बन्न सक्छ किनकि प्रत्येक 2013० मिनेटमा people०० व्यक्ति प्रवेश गर्दछन्, त्यसैले कतारबाट बच्न अनलाइन टिकट किन्नु राम्रो विचार हो किनभने तपाईं टिकट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सानो छूट
पार्क Güell को निर्देशित भ्रमण: € २।
वयस्क: € 8,50
And र १२ बीचका बच्चाहरू र सेवानिवृत्त::।
Years बर्ष भन्दा मुनिका बच्चाहरू नि: शुल्क प्रवेश।
पार्क Güell को निर्देशित भ्रमण
पार्क गोयलले तपाईंलाई बिभिन्न भाषाहरूमा मार्गनिर्देशित टुर सेवा प्रदान गर्दछ ताकि तपाईं एन्टोनियो गौडी द्वारा सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यहरूको प्रतीक इतिहास र प्रतीकहरू सिक्न सक्नुहुनेछ।
गाईडको साथमा, मार्गनिर्देशित भ्रमणले आगन्तुकहरूलाई उन्नाइसौं शताब्दीको बार्सिलोना प्रवेश गर्न पार्कको रहस्य र प्रकृतिसँगको सद्भाव सिक्न अनुमति दिन्छ। भ्रमणको क्रममा, पार्क घीलको चासोको सबै प्रतीकात्मक बिन्दुहरूको माध्यमबाट करिब एक घण्टाको यात्रा गरिन्छ। त्यहाँ दुई प्रकारका निर्देशित भ्रमणहरू छन्: सामान्य निर्देशित भ्रमण र निजी निर्देशित भ्रमण।
एक बर्ष million० लाख आगन्तुकहरूको साथ, बार्सिलोना अझै पनि यसको धेरै आकर्षणको लागि विश्वमा सबैभन्दा ठूलो पर्यटक आकर्षणको साथ शहरहरूको शीर्षमा स्थापित छ। पर्यटकहरूले सबैभन्दा मूल्यवान् कुरा भनेको आधुनिकता हो, एक वास्तुकला र सजावटको शैली जुन क्याटालानको राजधानीमा अन्टोनी गौडेको अटल टिकट हो।
प्रत्येक वर्ष लाखौं पर्यटक बार्सिलोना आउँदछन् बिरोधमा यस प्रतिभाको कामको बारेमा जान्न जुन शहरको विभिन्न भवन र ठाउँहरूमा आफ्नो कला कसरी खिच्ने भनेर जान्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » स्पेन शहरहरू » बार्सिलोना » कसरी पार्क G visitell भ्रमण गर्ने